बहुमत नेपालीको प्राण धान्ने भोजनका रूपमा लिइएको चामलको स्रोत धानको बिरुवा अंग–प्रत्यंगमा सजिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । पानी नपरे पनि असार १५ मा धान उत्सव मनाउने औपचारिकताले यस पालि पनि किसानइतरलाई रमाइलो दियो नै । धान नेपालीलाई नभई नहुने अनाज हो ? यो पोषणको मुख्य स्रोत हो ? जीवन बचाउने आधार हो त ? करिब पांँच हजार वर्षदेखि मानवले उपयोगमा ल्याएको अनुमान गरिएको भात अडिलो र नरम शाकाहारी भोजन हो । नेपाल मात्रै होइन, पूर्वी एवं दक्षिणी एसियाली सबैजसो मुलुकमा भातै भरपर्दो आहारा मानिन्छ । विश्वको आधा जनसंख्याले दैनिक रूपमा मुख्य भोजनका रूपमा भातै प्रयोग गर्ने गर्छ ।
चामलमा हुने कार्बोहाइड्रेट बाहेकका भिटामिन एवं खनिज पदार्थहरू चामलको बाहिरी पत्र अर्थात् चोकरमा हुन्छन् । विशेष गरी सेलर मेसिनमा धान कुटाउँंदा, चामल धेरै पटक पखाल्दा, ठूलो आगोमा नछोपी पकाउँदा वाष्पीकरण भई त्यस्ता पोषण पदार्थ उडेर जान्छन् । त्यसैले भात छोपेर सानो आँचमा पकाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रति १०० ग्राम चामलमा १२० क्यालोरी हुने भएकाले भात नखाए दुब्लो भइने सोचाइ गलत हो । भात मात्रै खाँदा प्रोटिन र भिटामिनको अभाव हुन्छ । त्यस्तो व्यक्ति मोटो भए पनि उसमा मांसपेशी, नसा, मस्तिष्क, रगत, छाला आदिका लागि आवश्यक प्रोटिन, भिटामिन र खनिजको कमी हुन्छ ।
हामीले भातलाई महत्त्व दिएकाले बढी श्रम र पानी चाहिने धान खेतीमा हाम्रो पसिना बगिरहेको हो । देशभित्रकै उब्जनीले नपुगेपछि वर्षेनि अर्बौंको चामल आयात भइरहेको हो । पौष्टिकतायुक्त खाद्यान्न एवं नगदेबालीको उत्पादनमा राज्यले जोड दिन सके नेपालीको भात खाने बानीमा परिवर्तन आउँदै जान सक्थ्यो, नेपालीले भातभन्दा त्यसका साथीमा बढी बल गर्न सक्थे । प्रकाशित : असार २४, २०७६ ०९:३७
त्यसमा पनि हरियो सागसब्जीमा पाइने पोली–फिनोलहरू स्नायु प्रणालीको स्न्याप्टिक प्लास्टिसिटी क्षमता बढाउने अचूक अमृत भेटिएकाले संज्ञानात्मक र मानसिक स्वास्थ्यको व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक छाक केही हरियोपरियो खान जोड दिइएको हो ।
सूर्यको सेतो प्रकाश हामीले देख्ने सक्ने सात रङ्ग मिलेर बनेको हुन्छ । बिरुवाको पातमा रहने क्लोरोफिलको मलिकुलले सात रंगमध्ये नीलो र रातो प्रकाश सोसी इनर्जीका लागि चाहिने खाना बनाउने गर्छ । कतिपय बिरुवाको फलमा हुने केरेटिनोइड पिगमेन्ट (जस्तै— गोलभेडाको लाइकोपिन, मकैको जियोजेन्थिन, सुन्तलाको फलको बोक्राको बिटा केरोटिन आदि) ले सूर्य किरणबाट बैजनी र नीलो–हरियो लाइट लिएर आफूलाई आकर्षक बनाउने गर्छन्, कीरा आदि झुम्मिऊन्, फल खाऊन्, बीउ अन्यत्र पुगोस् र आफ्नो वंश विस्तार होओस् भनेर । सूर्यको सेतो प्रकाश जस्तै चन्द्रमाबाट आउने प्रकाश प्रिज्मबाट पास गर्दा सूर्यको प्रकाश जस्तै सातै वटा किरण त दिन्छ, तर अलि इन्फ्रारेडतिर सरेको भेटिन्छ । सूर्यबाट आउनेभन्दा ४ लाख गुना मलिन, इन्फ्रारेडतिर सरेको प्रकाशले बिरुवाको वृद्धि र मेटाबोलिजममा आश्चर्यजनक सकारात्मक भूमिका पुर्‍याउँछ ।